Mpanamboatra lamba sy mpamatsy lamba vita amin'ny jiro vita amin'ny silikonika
Black Fiberglass Cloth dia lamba fiberglass, izay manana ny toetran'ny fanoherana ny mari-pana, ny anti-harafesina, ny tanjaka avo ary mifono vy vita amin'ny silika voajanahary.
Lamba Fiberglass amidy
Fiberglass Cloth For Sale dia vita amin'ny lamba vita amin'ny fiberglass ary fonosana silipo manokana avo lenta. Mari-pana miasa: -70 ℃ --- 280 ℃. Azo ampiasaina ho fitaovana insulation elektrika izy io. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Lamba laozavo Fiberglass
Ny lamba lafaoro vita amin'ny tanety lafaoro dia vita amin'ny lamba vita amin'ny fiberglass ary mifono silipo manokana avo lenta. Mari-pana miasa: -70 ℃ --- 280 ℃. Azo ampiasaina ho fitaovana insulation elektrika izy io. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Lamba Fiberglass Colored dia vita amin'ny lamba vita amin'ny fiberglass ary fonosana silipo manokana avo lenta. Mari-pana miasa: -70 ℃ --- 280 ℃. Azo ampiasaina ho fitaovana insulation elektrika. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Fiberglass lamba lamba mpamatsy vita amin'ny fiberglass fototra lamba sy avo kalitao manokana silipo coating. Fiasana mari-pana: -70 ℃ --- 280 ℃. Azo ampiasaina ho elektrika insulation fitaovana. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Akanjo Fiberglass Ho an'ny Waterproofing dia vita amin'ny lamba vita amin'ny fiberglass ary fonosana silipo manokana avo lenta. Mari-pana miasa: -70 ℃ --- 280 ℃. Azo ampiasaina ho fitaovana insulation elektrika izy io. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Lamba fibre fitaratra ho an'ny tantera-drano
Ny lamba vita amin'ny fibre ho an'ny tantera-drano dia vita amin'ny lamba vita amin'ny fiberglass ary mifono silipo manokana manara-penitra. Ny compensator tsy metaly dia azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo. Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
Clot Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic,